Shiinaha Mini Excavator 1.6Tons - ME16 warshad iyo alaab-qeybiyeyaal. Bonovo
Xullo qashin-qubka mini-ga ah ee shaqadaada ayaa muhiimad weyn u leh kordhinta wax-soo-saarka. Bonovo waxay kuu soo bandhigi kartaa noocyo kala duwan oo ku habboon shaqadaada gaarka ah, iyadoo aan loo eegin inaad raadineyso gurguurto ama qotomiyeyaal taayir leh, Bonovo waxay ku siin kartaa culeys hawl socod oo u dhigma 0.7 ilaa 8.5 tonnage
Lasoco dhererka guud 1450mm
Nadiifinta dhulka 437mm
Istaraatiijiyada wareega wareega dhamaadka 740mm
Baaxadda Gawaarida 1040mm
Baaxadda raadinta 230mm
Dhererka gaadiidka 3160mm
Dhererka guud 2377mm
Guud ahaan Halbeegyada ME16
Miisaanka mashiinka 1400kg
Awoodda baaldi 0.045m3
Foomka qalabka shaqeeya Backhoe
mishiinka Model Yanmar3TNV70
Awoodda waxsoosaarka la qiimeeyay / xawaaraha 10 / 2200kw / r / daqiiqo
Xuddunta ugu badan 51.9 / 1600N.M / r / daqiiqo
xawaaraha iyo qodista xoogga Max xawaaraha safarka 3.5km / saacaddii
Xawaaraha ruxista llrpm
Awoodda fasalka 30 °
Xoog baaldi qodaya 10.5KN
Gacanta qodaya 6.5KN
Xoog tractive 13.5KN
Cadaadiska dhulka 35kgf / cm2
Qalabka raadraaca Raadinta xarkaha
Nooca qalabka xasilinta Saliida saliida
Max qodida gacan 3470mm
Qoto dheer qodista 2150mm
Dhererka Max qodaya 3275mm
Max dhererkiisa daadinta 2310mm
Qoto dheer Max qodis qoto dheer 1740mm
Meelaha wareega ee Mini 1440mm
Dhererka wiishka Max Dozer 262mm
Si qoto dheer wax u goosadka daab Max Dozer ah 192mm
Nidaamyada wax soo saarka
Araajida - hawlgalka tijaabada mini qodayaasha
Aqoonta Qur iyo shahaadooyinka
Raritaanka Weelka iyo Xidhmada LCL
1.Mudo intee le'eg ayay tahay waqtiga damaanada mini qodayaasha?
J: Hal sano.
2. caddeyn noocee ah oo aad ka heleysaa qodista yaryar?
J: CE, ISO9001, SGS, iwm. Haddii aad u baahan tahay shahaadooyin kale oo dalal kala duwan ah, waanu taageeri karnaa inaad dalbato;
3.Ma ku habboon tahay inaad aragto booqo warshaddaada?
J: Macaamiil kasta waxaa si diiran loogu soo dhaweynayaa inuu soo booqdo warshaddeena, si naxariis leh ugu wargeli jadwalkaaga ayaan kuu diyaarin doonaa adiga.
4.Waa maxay faa iidooyinkayagu marka la barbar dhigo Soo saaraha / Warshadaha?
- Qiimaha Tartan-waxaan u shaqeyneynaa sida kuwa hormoodka ka ah ganacsatada kala duwan ee horseedda mashiinnada dhismaha Shiinaha, waxaana loola dhaqmaa sicirka ugu wanaagsan ee markasta.
- Khibrad warshadeed: waayo-aragnimadeena warshadeed waxaa dib loo taariikheyn karaa 1990-meeyadii waxaanan aasaasnay ​​warshad noo gaar ah sanadkii 2006.
- Jawaab Degdeg ah - Kooxdayadu waxay ka kooban tahay koox dadaalaya oo shaqo abuur leh, oo ka shaqeynaya 24/7 si ay uga jawaabaan su'aalaha macmiilka iyo su'aalaha markasta. Dhibaatooyinka ugu badan waxaa lagu xallin karaa 12 saacadood gudahood.
5.Mudo intee leeg ayuu qiimaheena ansax noqon doonaa?
Waxaan nahay shirkad jilicsan oo saaxiibtinimo leh, oo aan waligood hunguri ka qabin macaashka dabaysha, aasaas ahaan, sicirkeenu wuu xasilloon yahay sannadka oo dhan.
1) Heerka USD: RMB aad ayey u kala duwan tahay iyadoo loo eegayo sicirka sarrifka lacagaha ee caalamiga ah.
2) Soo-saareyaasha / Warshaduhu waxay hagaajiyeen qiimaha mashiinka, sababtoo ah qiimaha shaqaalaha oo kordhaya, iyo qiimaha alaabta ceyriinka ah.
Hore: Qodista Yar 1 Ton - ME10
Xiga: Mini Excavator 2 Ton - ME20
kiiska mini qodista
qodista mini yar
jcb mini qodista
Qashin qubka yaryar ee komatsu yaryar oo iib ah
qota mini qodista iibka